* Kuwedzeredzwa: Chokwadi chakaongororwa uye itsva indasitiri zvitauro zvakawedzerwa.
Yakanga yakadzoka mu 1985 apo iyo yekutanga zita reimba yakanyoreswa uye kubvira ipapo, Indaneti yakaona kuwedzera kwekutsvaga kwekuita mazita mazita.
Vhesi yeVerisign inotaura kuti inharaunda yehurumende mu2019 (Q3) yakawana 5.1 muzana yekukura kwegore negore, kuendesa mumari dzinosvika mazana matanhatu emamiriyoni, uye icharamba ichikura.
Zvakakosha kukosha kwehuwandu hwemazuva ano mune sangano rezuva rekugadzirwa kwekambaniki, zvinonzwisisika kune cheki, kuti ihurukuro yakakura kana sangano rimwe revanhu reku digital, kuti rive nezita renzvimbo.
Tingave tichida kana kwete, kuva nechinzvimbo chakanyoreswa kumakiti ako ndicho chinodiwa.
Kana iwe usina imwe chete, kana kuti unoda kungotungamira zvishoma rude mazita echirongwa, ipapo ramba uchiverenga. Tichagovera tsanangudzo dzekutenga nekunyora ruzivo rutsva rweVatangi!
WHSR inowana mari yekutsvaga kubva kune dzimwe makambani anotaurwa munyaya ino. Zvinotora mamiriyoni akawanda uye mari kuti zvigadzire zvinhu zvakakosha zvakadai – izvi zvinotsigirwa zvikuru.
1 Chii chinonzi domæne domæne?
2 Domænenavn Mazano
3 Bedste domænenavngenerator
3.1 1- Domæne
3.3 3- Zita Station
3.5 5- Tsvaga Dzimba Dzakawanda
3.6 6- Shandisa Business Name Generator
4 Ndezvipi Zvakawanda Zvokubhadhara Zita nyt domæne?
4.1 Ndingaita mari yakawanda sei zita rangu?
5 Nzira yekutenga zita idzva rezita kubva kubhistori?
5.1 1. Chengetera kuti nzvimbo inowanikwa
5.2 2. Bhalisa zita rako rechirongwa nemubhalisi wechirongwa
6 Nzvimbo Yakanakisisa Yokutenga domæne
6.1 Mishumo: Cloudflare seChita Domain Registrar
7 Nzira yekutengesa zita rekugara rakabva kune muridzi wayo?
7.1 Chii chinonzi zita rekuda kwemasimba?
7.2 Nzira Yokutengesa Ma Domaine Kushandisa Escrow
7.3 Nzira yekuziva sei kukosha kweiyo yekutanga-vane zita reimba
7.4 1- Salg af det seneste domæne fra Kushandisa
7.5 2- Kushandisa værktøjer til værdiansættelse af domæner online
8 Gara rude imwe nzvimbo, uye enda kunoshanda
Chii chinonzi domæne domæne?
Apo iwe unoda kutanga webhusaiti, iwe unoda kuva nezita renzvimbo. Asi chii chinonzi pokker iri zita rechizinda?
Iko chaizvoizvo tambo yemashoko anozivikanwa ayo, kana akaiswa mubhapiti, anodzorera mushandisi kune vi server yako IP.
Iwe unoona, kana webhusaiti ikasikwa, inowanzouya nekero yakasiyana inozivikanwa seWerld Name Name Servers (DNS) iyo inowanzoita seyiyi:
Izvozvo zvakaoma chaizvo kubata nepamusoro uye kunyora. Ichi ndicho chikonzero zita rakasiyana-siyana rinenge risiri nyore kune vashandisi vanoyeuka uye vanyore.
Kuti uwane mamwe mazano ezvesayenzi pamusoro pezita rechizinda, ndapota verenga nhungamiro yaJerry.
Dit domænenavn er din identitet. Ndizvo vanhu vanokuwana iwe, mazita avatengi vanopfuura kune vamwe.
Hazvina maturo kutaura, hapana chinhu chakakosha.
Ipa mabhizinesi ako danho rakanaka munzira yekutsvaga zita rakanaka remazita – pano mazano mashomanana ekuwana mazita mazita akanaka.
Chengetai zviduku uye zviri nyore kuyeuka (nzvimbo yedu "Webhosting Hemmelig hemmelighed afsløret" muenzaniso wakaipa!)
Dzivisa mazita ekutengeserana
Tora .com kana .net pese pazvinogoneka
Usatya kugadzira izwi kana kushandisa izwi rakaumbwa (svamp – FaceBook, YouTube, Google, LinkedIn)
Nyora uye uverenge kakawanda usati watenga (muenzaniso – chenjerera zvikuru kana zita rako rebhizimisi riri "Dickson Web")
Søgeord relevant *
* Ongorora: Iwe haudi nøgleord muzita rako rezita kuti ugoita zvakanaka paGoogle mazuva ano. Asi iyo pfungwa yakanaka yekuisa zita rako rezita rakatenderedza musimboti wepazita rako sezvo ichapa vashanyi vekutanga nguva yekukurumidza zano rekuti webhusaiti yako iri nezvei.
Kutumidza webhusaiti kunogona kunge kwakaoma, kunyanya kana uri mutsva kune webhusaiti yose uye chinonzi branding. Uye kana iwe wakafanana neni, unogona kupedza maawa uchifunga zvekuita zita, kungozoguma nekunyorwa kwezvipenzi.
Heano mazita mashoma mazita e generator kuti akubatsire kugadzirisa mazita ezita rezita.
* Dzvanya mufananidzo kuti utarise zvinotevera zvidzidzo zvemasimba.
Domainr ichawedzera chimwe chinhu chakasiyana-siyana chekugadzirisa kune zita rako rechirongwa nekupa mazano ekuwedzera. Kushanyirwa: Domainr.com
Vashandi veShokooid vanoita kuti vape mazita asina kuwanikwa kana kupinda mazwi makuru kuti vashandise semudzi. Kushanyirwa: Wordoid.com
3- Zita Station
Zita Station rinobudisa mazita asina kutarisana uye uye asina rodnøgle. Kushanyirwa: NameStation.com
Dot-o-mator isiri nyore kushandisa iyo inosanganisira mazwi maviri kuumba mazita matsva. Kushanyirwa: Dotomator.com
5- Tsvaga Dzimba Dzakawanda
Tsvakiridzo yeSain Domæne er nyore kushandisa-injinjini yekutsvaga yekuwana mazita emadzinza aripo. Icho chishandiso chinobatsira vashandi kuwana mazita emadunhu mazita kuburikidza nepakati pakutsvaga mutsara pamwe nemamwe mazita anowanzowanikwa mumazita emumunda. Icho chishandiso chinowanikwa neActattic (kambani iri shure kwe WordPress.com) mu2013. Kushanyirwa: LeanDomainSearch.com
6- Shandisa Business Name Generator
Shopify yeForretningsnavn Navn Generator inokubatsira kuti uite mazita ebhizimisi uye chengetedza zita rekuwanikwa. Tanga nekusarudza izwi rinokosha raunoda kuti nzvimbo yako iise, uye iwe uchawana mazana emazano. Kushanyirwa: Shopify Business Name Generator.
Ndezvipi Zvakawanda Zvokubhadhara Zita nyt domæne?
Chirongwa chekunyora uye yekuvandudza mari inodhura zvakanyanya kubva pakuwedzera kwayo (inozivikanwa seTLD). Mumuenzaniso uyu ne NameCheap, et .com-domæne inodhura $ 10,98 / gore uye inovandudza pamutengo mumwe chete. Kune rumwe rutivi, nzvimbo ye.store inodhura $ 4.99 / gore kunyoresa asi $ 48.88 / gore kuti uvandudze.
Saka, usati waenderera mberi uye uzviwanire zita idzva rezita rechirongwa, ndine chokwadi kuti rude mubvunzo wakanaka chaizvo waunoda kubvunza. Uye iyo ndeyokuti:
Ndingaita mari yakawanda sei zita rangu?
Mhinduro? Izvo zvinoenderana.
Zvinosuruvarisa, rude zvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kugadzirisa mutengo wezita reimba. Zvimwe zvezvikonzero izvi zvinogona kuva:
Kuwedzerwa kwezita remudunhu (muenzaniso: .com, .shop., .Me)
Apo zita rezita rekutenga rakatengwa kubva (mabhalisi akasiyana-siyana akasiyana-siyana)
Kureba kwezwi kana zvimwe zvimwe zvinowedzera zvaungada (muenzaniso: kuwedzera ruzivo rwemasimba, kuenda kumagariro emakore akawanda, nezvimwewo)
Kunyange zvazvo zvakaoma kupfuurira pasi kunyanya kuti zita rezita rinogona kudhura sei, iwe unogona kutarisira kubhadhara chero kupi zvako pakati pe $ 2 kusvika ku $ 20 pagore, zvichienderana nehotera chero ipi zutay kauta kana.
Murairo wakanaka wegumbo ndeyekuti itsvaer domæneudvidelser (.global, .design., .Cheap) inogona kunge yakadhura zvishoma kupfuura yakawanda domæneudvidelser (.com, .net), sezvo ivo vachangobva kuiswa pamusika .
Zano # 1 – Jeg er unogona kuwana yemahara domæne kubva kune vamwe vanopa vanopa, kusanganisira InMotion Hosting uye Hostinger. Kukwezva vatengi vatsva, mamwe makambani anotambira anopa mahara mahara nzvimbo kune yavo yekutanga nguva vatengi. Kana uri kuronga webhusaiti kekutanga, unogona kuchengetedza imwe mari nekutambira neaya mawebhusayithi.
Zano # 2 – NameCheap inomhanya kwakasarudzika mwedzi wega wega – iwe unogona kutarisa yavo saiti peji usati watenga idzva domain.
Nzira yekutenga zita idzva rezita kubva kubhistori?
Kuwana nzvimbo yako pachako inotyisa kusvika munzira mbiri:
Kutenga nekunyora nzvimbo yese itsva, kana
Kutenga imwe iripo yemumwe munhu.
Kune zvakanakira uye zvakaipira kunzira mbiri idzi asi pakupedzisira, zviri kwauri kuti iwe unoda her kubhadhara kune anodhura asi achizivikanwa maadha
Chinhu chimwe chete chaunofanira kufungisisa ndechekuti ungatumidza sei nzvimbo yako.
Sezvambotaurwa kare – Zita rakanaka remasimba rinogona kuva chigadziro chinokonzera kana kuputsa marashi yako, saka sarudza imwe nekuchenjera.
1. Chengetera kuti nzvimbo inowanikwa
Iye zvino zvawakasarudza rude zita rinoremekedzwa, ndiyo nguva yekuongorora kana zita redaire raunoda riripo kana kuti kwete.
Kuongorora kana zita rezita rekuwanikwa kuri nyore. Jeg er unogona kuita tsvaga kutsvaga neimwe yezita regrriter domæne; kana, shandisa Whois tsvakurudzo dzinoita kuti uone kana zita rako rezita rako riripo kana kuti ratorwa.
Kana nzvimbo yezita raunoda isingawanikwi, edza kuona kana zvakakosha zvakasiyana zvinowanikwa rude.
Unogona kutarisa kana zita renzvimbo iripo rinoshandiswa kuyengerera.
2. Bhalisa zita rako rechirongwa nemubhalisi wechirongwa
Izita rekutonga rawaka sarudza rakakwana uye wakaratidza kuti rinowanikwa, ikozvino yave nguva yekunyoresa zita rezita pachako.
Nyoresa domæne kana iripo.
Apo iwe unyoresa zita remudunhu, zvese zvemashoko ako ehutano nehuwandu hwehuwandu huchave hwakanyatsonzwisiswa NDIANI.
Izvi zvinoreva mashoko akadai seameri yako yekombiyuta, kero yepaimba, nhamba yefoni, nezvimwewo, ichawanikwa kuvanhu.
Kana iwe usingadi kuva nemashoko ako ega ega ari pachena, unogona kusarudza kubvisa zvinyorwa chako pachivande kuitira kuti ruzivo rwako rwekutsvaga ruchengetedzwe kubva kuvanhu vose.
Mari inoshandiswa kushandiswa kwebasa rekunyora yega yega inogona kusiyana asi kazhinji, iyo inotangira kubva $ $ $ – $ 10 pagore.
Nzvimbo Yakanakisisa Yokutenga domæne
Jeg er unogona kunyoresa domæne kana iripo. Asi, unoita sei chaizvo?
Nzira yakanakisisa ndeyokuenda kune imwe nzvimbo yechirongwa chekubatsira. Inzvimbo regsitrar ichakubvumira iwe kunyoresa zita rako redaire kana kuti kuburikidza nezvibvumirano zvegore negore kana bvumirano refu.
123 Reg 11,99 £ £ 11,99 £ 4,99 / gore
Domain.com $ 9,99 / gore $ 10,99 / gore –
Gandi 12,54 € / gore € 16,50 / gore –
Kom så far 12,17 dollar / kupon 12,17 dollar / kupon 7,99 dollar / gore
kuyengerera 12,99 dollar / gore $ 15,49 / køb Gratis
Zita rakaderera $ 10,69 / gore $ 12,88 / gore Gratis
Netværksløsninger 34,99 dollar / gore $ 32,99 / køb $ 9,99 / gore
Domæner Domæneregistrator nzvimbo dzichakubhadharai mari shoma iyo inowanzosvika pakati for $ 10 – $ 15 pagore, zvisinei, mazita emadunhu epamusoro pakudzingwa achadhura akawanda pakutenga kokutanga.
Dzimba dzinodhura dzinogona kusvika kusvika kune zviuru zvemadhora asi svamp mokudaro, mari yekuvandudza inonyatsodanwa ($ 10 – $ 15 pagore).
Mishumo: Cloudflare seChita Domain Registrar
Cloudflare vaudza mazita avo mazita ehurumende kubhadhara mabasa ane zero mari yekubhadhara uye inopa mitengo yakawanda yeTLD dzakadai se. Com, .net, .io ,, osv. purogiramu.
Zvinokwanisika her kutenga zita rezita rega zvakananga kubva kune webhusaiti inovaka kana kukamba makambani?
Vavaki vemawebsted vanoverengeka vanopa mano ekutenga chirongwa svamp mekunge iwe wakasika nzvimbo panzvimbo yavo.
Vamwe vevakanakisisa vekuvaka webusaiti nhasi, zvakadai Wix eller Weebly, ichakupa rusununguko rwemasikirwo emazita egore kana iwe ukanyorera kumapurogiramu avo egore negore.
Mari yekuvandudza, zvisinei, inogona kusiyana zvichienderana nespamberi pachayo neWix kupa $ 14,95 pagore kuti ivandudze apo Weebly inodhura zvishoma kune $ 19,95 pagore.
Kunyangwe zvingangodaro zvinyorwa zvishoma kana zvichienzanisa nekunyora ruzivo iwe pachako, kubatsirwa kwekutenga zita rekuda mazita kuburikidza newebsite yevashandisi ndeyokuti iwe unogona nyore nyore kubatanidza webudkima kimaa.
Nzira yekutengesa zita rekugara rakabva kune muridzi wayo?
Ko kana iwe uchida kutenga chinzvimbo chiri kutotanga kushanda rude?
Iwe unogona kusarudza kutenga mabhizinesi anoshingaira uye kuendesa unhu huno kuburikidza nemasipirwo akadai sezita rezita rekutsvaga.
Chii chinonzi zita rekuda kwemasimba?
Zita rezita rinokurudzira hutori hwemasimba echitatu-ega anobatsira mukutengesa-kutengesa mazita emumataini mazita paIndaneti. Aya masayiti anopa nzira yakachengeteka yokuti vatengi vatenge mazita ekutonga kubva kune vatengesi vanoda kuregera kubva mazita avo.
Rude huwandu hwemasimangita emazita escrow mazano anowanikwa, asi apa rude zvishoma kuti iwe unogona kutarisa: Escrow.com, Sedo, uye KøbDomains.
Nzira Yokutengesa Ma Domaine Kushandisa Escrow
Ngatiti iwe wakawana zita remudunhu uye iwe neye mutengesi wakasarudza pamari. Iko conundrum inova: Unobhadhara sei mari yakachengeteka uye unova nechokwadi kuti muridzi wacho anotumira umudyari wehutori kwauri?
Ndiko kunosvika kuno. Unogona kushandisa mashekeri ekuita kuti uone kuti mutengesi unoenda zvakanaka. Unonyatsoita sei izvozvo? Heino nzira:
Gadzira mutengesi wekutengesa pakati pako nemutengesi
Nyora rekodha-rude imwe nzvimbo yebasa rekutsvaga, uye sarudza maitiro echitengeserano pakati pako nemutengesi, iyo inosanganisira zita rezita (s) uye mutengo wekutengesa.
Ita mubhadharo wako kune kambani yekuendesa
Kana ukasarudza pamari yacho, iwe unoita kubhadhara kwako (kuburikidza nematare, kadhi rechikwereti kana chero imwe nzira) kune kambani yekuenda.
Zita rezita rinotamiswa kubva kune mutengesi kwauri
Apo kambani inokunda inogamuchira uye inoongorora mubhadharo, iyo inobva ichiraira mutengesi kuti adzore zita rekuda mazita kwauri.
Iva nechokwadi chokuti wakagamuchira zita regomiridzi wega
Iwe unoda kusimbisa pamwe nekambani yekutsvaga kuti umiridzi wezita rezita redu wakatumirwa kwauri. Shandisa NDIANI eller WHSR Webhost Spy Spy kuti uone kana muridzi wemuzinda wacho avandudzwa kana kwete.
Mutengesi anogamuchira mari kubva kunzvimbo yebasa rekuendesa
Sangano rinokurudzira rinozoona kuti zita redaire rakashandurwa uye ivo vachazopa mari kune mutengesi, kuderedza mari yavo. (Unogona kusarudza zvisati zvaitika iyo imwe yenyika inobhadhara mari kana kuti yakaparadzana nepakati.)
Nzira yekuziva sei kukosha kweiyo yekutanga-vane zita reimba
Paunenge uchitsvaga zita rekugara rine mazita, iro rinowanzowanika pamusangano wemarkmarked, vatengesi vega, uye vendesa – iwe uchacherechedza kuti kukosha kwavo kunogona kumira kupi kubva kune madhora mashomanana kusvomweom kumusoro.
Izvi zvingasava nzvimbo yakanakisisa yekuwana zita reimba kana iwe uchitanga kubuda.
Nzvimbo iyo iripo yakatarisa inowana mutengo wayo inogona kusarudzwa nenhamba yezvinhu zvakadai sekureba, mutauro, mamiriro, uye mazita evanhu. Hapana imwe nzira imwe chete iyo inogona kukupa mutengo wakakwana wokubvunza. Kune nzira, zvisinei, kuti ndikupe ballpark kukosha kwezita rezita uye zvinoda zvishoma kutsvakurudza rude yako.
1- Salg af det seneste domæne fra Kushandisa
Murairo wakanaka forsvinder kuti unzwisise kuti maitiro anokoshesa ndezvekutarisa kutengeswa kwechangobva kuitwa. Kutarisa kutengesa kwemazuva ano kunogona kukupa pfungwa yekuti madhii ari kutengwa uye kuti ndeapi.
DNJournal poster en domænerapportrapport izvo zvavanogara vachidzokorora uye mairi, vanonyora mazita mazita undgår achangobva kutengeswa kubva kune flere premium domænetjenester. Paunotarisa kuburikidza, tarisa kune mazita echirongwa chemashoko, urefu, uye zvimwe zvakakosheswa kuti uwane pfungwa yekuti zita rekudoma rakakosha sei.
Rapport om salg af domæner salg rakabudiswa paDN Journal (maj 2018)
Screenshot yaDN Journal salgsrapport.
Zvakakosha kucherechedza kuti mushumo wacho unongowedzera nhamba shomanana yemazita emumatare, naizvozvo haisi iyo yakanyatsonyatsorongwa urongwa.
2- Kushandisa værktøjer til værdiansættelse af domæner online
Imwe nzira yekutsvaga chiremera chemuzinda ndiyo kuburikidza nedunhu rekuongorora maitiro kana shanduro yekuongorora yekutsvaga. Aya masayiti achakubvumira kupinda mune rimwe zita rekuda uye achakupa mutengo unobvunzwa.
Mamwe mashomanana aunogona kutarisa ndeawo Estibot, WebsiteOutlook, uye URL-vurdering.
Aya masayiti anoona kukosha kwemasimusi achishandisa SEO-zvine chokuita nezvinhu zvakadai sekutsvaga, nøgleord, Alexa rang, mwedzi wekutsvaga, nhamba yekutsvaga, uye mari inoshandiswa rude imwechete.
Chinhu chimwe chekucherechedza ndechokuti nzvimbo dzakasiyana dzinogona kukupa maonero akasiyana. Chirongwa chakanaka chaizove kushandisa shanduko dzakasiyana-siyana uye wozvienzanisa nekukupa kuongororwa kuri nani kwezita rezita rezita reimba.
Zvakare, hapana marongerwo emitengo ekutenga zita rezita uye iwe unogona kutarisira kuti vashandurwe kakawanda. Kana iwe uchida pfungwa yakawanda yezita rematunhu mazita, unogona kuenda kune dzimwe nzvimbo dzakadai Afternic eller Tenga Mazita kuti uwane manzwiro emari.
Gara rude imwe nzvimbo, uye enda kunoshanda
Pari zvino, unofanira kunge uine ruzivo rwakakwana kuti ubatsire kunyoresa mazita echirongwa chetsika yebasa rako kana bhizimisi iwe pachako.
Zvingave zviri kuburikidza nyt websted vavakiki kana kuti domæneregistrator, kupiwa zita rezita rinofanira kuva chinhu chokutanga chamunopedza musati maenda kurarama. Kana uchinge watora izvozvo pasi, inguva yekufungisisa achivaka website yako.
傻瓜域名：Tingatenga Sei Zita reZita